VLC Media vs Player Classic
VLC Media iyo Player Classic waa labo ciyaaryahano oo warbaahinta caanka ah ee internetka. Haddii aad qabto wax fikrad ah kama taas oo ka mid ah in la doorto, aad u yimaadeen inay meel sax ah. Maqaalkani waxa uu is barbar doonaa labo ciyaaryahan oo kaa caawin in aad farta ka baxay oo ka mid ah waa uu ka fiican.
Hordhac ah VLC Media iyo Player Classic
VLC waa ciyaaryahan furan-il cross-madal multimedia iyo qaabka ay diyaariyeen mashruuca VideoLAN ah. Waxa ay taageertaa audio iyo video codecs badan iyo qaabab file iyo sidoo kale DVDs, VCDs, iyo hab maamuuska kala duwan geeyo, taas oo la odhan karaa waa ciyaaryahan multimedia la qaadi karo, encoder, iyo streamer.
Media Player Classic waa ciyaaryahan warbaahinta yar oo khafiif ah ee Windows. Waxa ay u muuqataa sida ay Windows Media wanaagsan jir ah Player 6.4, laakiin waxa uu leeyahay muuqaalada kala duwan oo dheeraad ah. Tusaale ahaan, waxa uu ka dhisay-in DVD ciyaaryahan la zoom-waqtiga dhabta ah, oo taageero u subtitles AVI, QuickTime iyo taageero RealVideo (u baahan QT iyo / ama ciyaaryahan Real), iyo oo badan.
Is-barbardhig VLC iyo MPlayer
Operating Systems Windows / Linux / Mac OS X / macruufka / Android Windows
Latest Version 2.0.6 6.4.9.1
Inta badan Release Recent Taariikhda Apr 11, 2013 Dec 10, 2008
Original Release Date Feb 1, 2000 May 29, 2003
Qaabab ay taageerayaan .wav, .mp3, .mp4, .aac, .wma, .ogg, .ra, .avi, .mov, .xvid, .mpeg, .3gp, .asf, .asx, .flv, .m2p iyo iwm .wma, .mp3, .mp4, .ogg, AAC, .mkv, .xvid, divx, .avc, .avi, .flv iyo ECT
Laga soo gaadhi this, waxaan arki doonaa VLC waa ka wanaagsan yahay Media Player Classic marka ay timaado in muuqaalada iyo hawlaha.
Alternative si VLC Media iyo Player Classic
Iyaduna in la yidhaahdo, labada VLC Media iyo Player jira ciyaartoy warbaahinta awood badan oo ay ka buuxaan-ciyaaray, ay ka maqan tahay qaababka qaarkood in qaar ka mid ah ciyaartoyda kale ee warbaahinta hantidaan. Aniga ahaan, waxaan doorto weli warbaahinta kale oo si sahlan loo isticmaalo awood badan player- Wondershare Player . Waxaa loogu tala galay la interface ka sii dareen oo user-friendly iyo sidoo kale taageertaa qaabab warbaahinta kala duwan. Sidaa daraadeed, waxaad si fudud u ciyaari karaa oo wuxuu ku raaxaysan videos aad jeceshahay iyo Cajalado aan ka kaaftoomi kasta. Waa maxay dheeraad ah, waxa ay bixisaa muuqaalada dheeraad ah horyalka Talyaaniga. Tusaale ahaan, waxaad qabsan kartaa snapshots iyo iyaga dhejiya galay isku waslad, doorato in aad computer ku hoos xidhay ka dib markii loo maqli karo, taariikhda loo maqli cad, ECT. Hadda download media player ama ka fiiri macluumaad dheeraad ah.
MPlayer vs VLC- oo ka mid ah waa ka wanaagsan?
7 khadadka amarka VLC aad u baahan tahay inaad ogaato
Sida loo isticmaalo VLC sida Screen ah Qabsashada Tool?
> Resource > VLC > VLC Media vs Player Classic: Waa kuwee ka mid ah waa ka wanaagsan?